ရွှေဈေး အမြင့်ပိုင်းတွင် ငြိမ်နေပြီး အရောင်းအဝယ်အေးနေ - Yangon Media Group
ရွှေဈေး အမြင့်ပိုင်းတွင် ငြိမ်နေပြီး အရောင်းအဝယ်အေးနေ
ပြည်တွင်းရွှေဈေးနှုန်းမှာ အခေါက်ရွှေ တစ်ကျပ်သားလျှင် ကျပ် ၉၄ဝဝဝဝ ကျော် ဖြင့် အမြင့်ပိုင်းတွင် ဆက်လက်တည်ရှိနေပြီး ရွှေဆိုင်များတွင် အရောင်းအဝယ် နည်းပါး နေကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းအသိုင်းအဝိုင်းမှသိရသည်။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်များက ပွင့်လင်းရာသီဖြစ်ပါက ပြည်တွင်းရွှေ ရောင်းအားကောင်းခဲ့ သော်လည်း ယခုနှစ်တွင်မူ ၂ဝ၁၇ ခုနှစ်ကုန်အနီး နိုဝင်ဘာလကတည်းက အရောင်းအဝယ် နည်းပါးနေခြင်းဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရန်ကုန်တိုင်းရွှေလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းမြင့်က ”ရွှေဈေးက သိပ်မကျဘူးဖြစ်နေတော့ ဝယ်လိုအားနည်းတယ်။ ဈေးကွက်အနေအထားက အဝေးကြီးကို ကြိုပြီးတော့ ခန့်မှန်းလို့မရနိုင်ဘူး။ အကြမ်းဖျင်းကာလတို ခန့်မှန်းကြည့်မယ်ဆိုရင် ကျဆင်းဖို့ မရှိနိုင်ဘူး”ဟု ပြောသည်။ လက်ရှိတွင် ကမ္ဘာ့ရွှေဈေးလည်း တစ်အောင်စလျှင် ဒေါ်လာ ၁၃၃ဝ ကျော်ရှိပြီး နိုင်ငံခြားငွေ လဲလှယ်နှုန်းမှာ တစ်ဒေါ်လာ ၁၃၂၇ ကျပ်ဝန်းကျင်တွင်ရှိရာ အတက်အကျ မရှိကြောင်း သိရသည်။
”ရွှေဝယ်သူတွေ အခွန်ဆောင်ရတော့မယ်ဆိုတဲ့ ၂ဝ၁၇ ဧပြီလကတည်းက အရောင်း အဝယ်ဆိုင်းနေတာ။ ဒီဘက်နယ်မှာတော့ လောလောဆယ်အနေအထားကို ပြောရရင် ဝယ်ဖို့နေနေသာသာ ပေါင်တာကများနေတယ်။ ပေါင်နှံတာတောင် မရွေးနိုင်သေးလို့ မလာနိုင်တဲ့သူတွေကို သူတို့ပစ္စည်း ဆုံးရှုံးသွားမှာစိုးလို့ ခြောက်လကြာရင် အတိုးလာသတ်ဖို့ သတိပေးရပါတယ်”ဟု ပြည်မြို့မှ ဝင်းသစ္စာရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင် ဒေါ်ငြိမ်းငြိမ်းမြင့်က ပြောသည်။ လက်ရှိဖြစ်တည်နေသည့် ဈေးနှုန်းအနေအထားမှာ လာမည့်သင်္ကြန်မတိုင်မီကာလအထိ ကျဆင်းနိုင်မည့်အခြေအနေမျိုး မရှိသေးကြောင်း ရွှေလုပ်ငန်းရှင်များက သုံးသပ် ပြောဆိုထားသည်။
သင်္ကြန်ကာလ အတွက် ငပလီကမ်းခြေရှိ ဟိုတယ်များ သာမက မြို့ ပေါ်ရှိ တည်းခိုခန်း များတွင်ပါ အခန်း ကြ??
ဝန်ကြီးများရုံးတွင် ရှစ်လေးလုံး သမိုင်းပြတိုက်ဖွင့်မည်
နိုင်ငံခြား သံရုံးများမှ သံအမတ်ကြီးများ၊ သံတမန်များ၊ ကုလသမဂ္ဂ အဖွဲ့အစည်းများမှ တာဝန်ရှိသူ??
အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး မြန်မာယူနီကုဒ်စံစနစ်ကို ပြောင်းလဲသုံးစွဲကြရမည်
သက်ငယ်မုဒိမ်း ပညာပေး ‘သမီးကလေးရဲ့ ရွာ’ ဖြစ်ရပ်မှန် ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီး မကြာမီ ရုံတင်မည်